SEZ to benefit Tharisa’s Zimbabwean PGM subsidiary Karo - World Free Zone (Hengqin) Summit
Zimbabwe's Special Economic Zones Authority (Zimseza) has declared a portion of Tharisa’s PGM subsidiary Karo Zimbabwe’s Selous mining licence measuring 50 667 hectares as a special economic zone (SEZ).
The zone is located on certain pieces of land covered by special mining grants issued to a subsidiary of Karo Zimbabwe – in which Tharisa is a 26.8% indirect holder and has an option to increase its interest.
Karo Zimbabwe has recently completed a 238 borehole, 32.4 km PGM drilling programme on the property situated on the Great Dyke of Zimbabwe, with the drilling focused on the western boundary of the license to average depths of 50 m to 150 m. Karo Zimbabwe is on track to deliver a resource statement before the end of the 2019 calendar year.
“Zimseza’s award of the SEZ status to Karo’s license in Zimbabwe is a critical step in the development of what could become a world-class vertically integrated PGM operation. The Karo mine could transform the Zimbabwean PGM sector, bringing significant economic benefits to all stakeholders and building a long-term sustainable mining industry,” saysTharisa CEO Phoevos Pouroulis.